Global Voices teny Malagasy » Iraniana-Amerikana Mitady Olona Be Herim-po Hanavotra Aina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Desambra 2012 13:23 GMT 1	 · Mpanoratra Hooman Askary Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Etazonia, Iràna, Fahasalamàna, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
Mitady olona be herim-po ny mpiserasera Iraniana. Tsy ho amin'ny revolisiona na ady, fa mba hanavotr'aina. Nasim, tanora vehivavy Iraniana avy ao Avaratr'i Kalifornia no mila taova tsokan-taolana (moelle osseuse) atao grefy. Nanafaingana ny hetsika  ireo Iraniana malaza marobe mba hanampy amin'ny fanaparitahana ny hafatra ho fanavotana azy. Nampiasa ny tambajotra [fampahalalam-baovao] sosialy izy ireo mba hitady olona be herim-po hanome tsokan-taolana maimaim-poana.
Teraka ny tetikasa iray mba hamahàna ity karazana fanamby tamin'ny 2003 ity: Tetikasa Tsoka. Araka ny hita ao amin'ny pejy facebook-ny , Iraniana-Amerikana Behnoush Babzani, no namorona ny Tetikasa Tsoka, tratry ny aretin'ny rà tsy fahita firy izy tamin'ny taona 2003. Rehefa avy notsaboina tamin'ny fanomezana taova tsokan-taolana avy amin'ny anadahiny, nanome azy vinavina miavaka mikasika ny fiainan'ireo mararin'ny tsoka tahaka azy izay miankina amin'ny grefy tsokan-taolana izany zava-niainany manokana izany – izay matetika hita eny amin'ny olona mitovy foko niaviana.
Toa hita fa nahavotra marary hafa mijalin'ny aretina tahaka ny homamiadan'ny tsoka ny hetsika noforonin'i Behnoush izay nipaka tamin'ireo namana Iraniana-Amerikana mba hanampy. Nasim, 21 taona no iray amin'ireo marary. Nampihetsi-po ny olona ny tantarany ka nahatonga ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina sy ireo olo-malaza mba hiezaka hanampy hamonjy azy. Nandefa lahatsary ahitana hafatra tao amin'ny Youtube  izy ireo, ary santiona-na fanomezana tsoka ary niezaka nanentana tamin'ny alalan'ny tambajotra [fampahalalam-baovao] sosialy. Ohatra iray ity pejy Facebook  ity .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/26/43592/
 Nanafaingana ny hetsika: https://www.facebook.com/ProjectMarrow